Ukunakwa kwabesifazane, sicela ufake ifomu elilodwa lefayela ku-DJ idokodo lakho lokuncoma ngokuncoma! (okukhiqiziwe) - Ukubala kwe-NYE kwe-Djs, i-Vjs, i-nightclub 2019
SKU: I-DJ DROP 100 - #32 Isigaba: DJ Drops
Ukunakwa kwabesifazane, sicela ufake ifomu elilodwa lefayela ku-DJ idokodo lakho lokuncoma ngokuncoma! (okukhiqiziwe)
(isampula kusuka eBeyonce) Bonke abesifazane abangashadile benza umsindo! (okukhiqizwayo)
(Isampula esivela ku-Hat Your On On) Uhhhhh .... Akuyona leyo club enomusa. Akukho ukukhishwa okuvumelekile! (Okukhiqiziwe)